xxx - 14/04/2003 10:35
Misy olona tia ahy any.Niaraka tamiko zany olona zany nandritra ny fotoana fohy.Zao nefa izy efa tsy tiko satria mampirafy.De nialako izy,de hatramin'izao izy dia mbola misisika amiko foana nefa izaho efa manana olona tiko de manelingelina ny fiarahanay izy io!de inn no tokony ataoko @zany zavatra ataony zany???
xxx - 14/04/2003 11:05
Oudriiiiy ! tsory aminy ny marina ! raha mbola misisika ? présenter-o azy mitsy ilay olona miaraka aminao !
Teneno anah rah ambola mikiry !
cratiarison - 15/04/2003 15:06
.Teneno azy ny marina ary manadihadiha. Matoa izy mandany andro aminao dia mbola tia. Ary tadidio fa matoa izy tsy mifikitra amin'ilay iray mety tsy dia mazoto aminy koa ? Ny resaka mazava ihany no tsara indrindra fa mety be ny ambadika mamatotra nefa tsy fantatra.
zarai - 18/04/2003 17:40
Any andro any volana fa hangina eo ihany izy e. Ny eo am-pelatanana hamafisina sao leo be ny fanakorontanany. Aza rarahina fotsiny dia vita. Izy koa anie tsy irery e.
manakasina - 19/04/2003 15:24
tsotra asaivo miverina @ilay nanitsahan anaao izy fa aza avela hanakorotana ny efa milamina
levondraky - 06/05/2003 15:28
Manaova fanasàna tsotsotra any amin'ny restaurant. Tongava ao ianao sy ilay olona miaraka aminao (asina fanomanan-tsaina ho azy mialoha). Asainao koa ilay niaraka taminao taloha nefa mbola misisika. Dia asaivo mitondra ilay namana namadihany anao. Mino aho fa ho tonga daholo ireo. Tsy toaka no sotroina fa divay. Rehefa miakatra kely ny daozy (fa tsy miakatra be) dia arosoy ny resaka. Lazao izy fa eo ampikarakarana ny raharahanareo ka manasa andrizareo hanatrika. Anontanio izy raha efa mba manana tanjona toy izany. Cool be ny resakao dia tsy hisy raorao mandrapirava ny fiaonana. Ianao no mandoa ny fakitiora rehefa avy eo. Mirary fahombiazana. Azo tsy raisina ny torohevitro.
xxx - 18/07/2003 21:11
Misaotra an'ilay namana io alohako io zany e. Tsy mba nieritreritra an'izany aho fa izao koa anefa. Angamba aho aloha mijery film loatra fa rehefa hisisika izay ange izy ka tsy ahoany na manambady aza ianao e!
Dia hamafiso ny fiarahanao @ ilay miaraka aminao izao. Miresaha tsara aminy fa sao leo @ fanelingelenana eo tokoa izy. Dia hazavao tsara @ ilay misisika koa izay zvt tsy henonao ho azy intsony.
Tsy misy tsy vitan'ny fifampiresahana.
pisoin - 09/04/2005 13:51
marina izany e! aleo miresaka mazava fa izay no vaha olana tsara indrindra. rhf tsy mety de ho hita eo indray!